Rangoon/Yangon | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 09/04/2009 ⋅ 1 Comment
အခုမြင်နေရတဲ့ ရန်ကုန့်ရဲ့ မြို့သက်တမ်းက တိုတိုလေးပဲရှိပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေ အောက်မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၈၅၂မှာသိမ်းအပြီး တနှစ်အကြာ ၁၈၅၃မှာ ဗြိတိသျှအင်ဂျင်နီယာ ဖရေဇာ Fraser က မြို့ကို အကွက်ချပြီး ပြန်ဆောက်ပါတယ်။
၁၈၄၆မှာ ကာလကတ္တားကနေ သဘောင်္နဲ့ အောက်ဘက်က ထားဝယ်တို့ မော်လမြိုင်တို့ကို ဖြတ်ပြီး လာလည်တဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေဆိုရင် ရန်ကုန်ကို နုံချာတဲ့မြို့စုတ်လေးလို့ မြင်ကြတယ်။ စာရေးဆရာ တယောက်ကဆိုရင် “The appearance of Rangoon…….is wretched, and suggestive only of the utmost meanness and poverty.” မွဲတေတေ အညတြမြို့လေးတဲ့။
သူ့အရင် ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်အပြီး ၁၈၂၄မှာ အာသံတို့တနသာင်္ရီတို့မှာ တိုက်ပြီးခိုက်ပြီး ရန်ကုန်ကို ဆက်ချီလာတဲ့ ဗြိတိသျှတပ်သားတွေက ရန်ကုန်ဆိုတာကို ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်နိုင်တဲ့ ဆိပ်ခံဘောတွေ၊ သဘောင်္တွေကပ်ဖို့ ဆိပ်ကမ်းတွေ၊ အကောက်ခွန်ရုံတွေရှိတဲ့ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး မြို့အဖြစ်နဲ့ စိတ်ကူးထဲမှာ မြင်ကြည့်ပြီး လာကြရာက ရန်ကုန်လည်းရောက်ရော သူတို့ထင်ထားတာနဲ့ လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ မြို့အခင်းအကျင်းက တက်တက်စင်အောင် လွဲနေပါသတဲ့။
သစ်သားအိမ်လေးတွေပဲများပြီး တိုက်ခံအိမ်ဆိုလို့ နိုင်ငံခြားသားပိုင်တဲ့ တိုက်နည်းနည်းပဲရှိပါသတဲ့။ မြို့သိမ်းတပ်က ဗိုလ်မှူး Snodgrass က မြို့ကိုမြင်မြင်ချင်း အင်းဝဘုရင်တွေကို အပြစ်တင် ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဘကြီးတော်က နန်းစံဘုရင်ပါ။ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်ရောက်မှ မင်းနေပြည်တော်ကို မန္တလေးပြောင်းတာမို့ မင်းတုန်းမင်းမတိုင်ခင်က မင်းအဆက်ဆက်ကို အင်းဝဘုရင်တွေလို့ အင်္ဂလိပ်က သိမ်းကျုံးပြီး ပြောလိုက်ပုံရပါတယ်။
Snodgrass ပြောတာက အင်းဝမင်းတွေဟာ နိုင်ငံခြားသားရော ဒေသခံတွေကိုပါ တိုက်ခံအိမ် ဆောက်ခွင့် မပြုပါဘူးတဲ့။ အုတ်တို့ ကျောက်တို့ အင်္ဂတေတို့နဲ့ အိမ်ကြီးရခိုင်တွေ ဆောက်ပြီးရင် ဘုရင်ကို ခုခံခြားနားဖို့ရာ ပိုလွယ်မှာမို့လို့တဲ့။ နောက်ပြီး ဘုရင်တွေကလာပြီး စစ်တိုက်ရင် အိမ်ကောင်းတွေဆိုရင် အလွယ်တကူ ဖျက်ဆီးဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်လို့ နုံနဲ့နဲ့ အိမ်လေးတွေသာ ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ အင်းဝမင်းတွေဟာ ရက်စက်သူတွေလို့ ရောက်ရောက်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်း ဆိုသလို မြို့ကိုမြင်တာနဲ့ ဗမာဘုရင်တွေကို အပြစ်တင်ပါတယ်။
သူများမြို့ကိုလည်း သိမ်းသေးတယ်။ မြို့ကိုပိုင်တဲ့ ဘုရင်တွေကို အသုံးမကျဘူးလို့လဲ ပြောသေးတယ်။ အသုံးမကျသူတွေလက်က သူတို့က မြို့ကိုယူပြီး ပြန်ပြီးပြုပြင်ပေးမယ်။ ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပေးဖို့ဟာ သူတို့လို ကြီးမြတ်တဲ့ လူမျိုးတွေရဲ့ တာဝန်အပြင် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးတခုလည်းဖြစ်တယ်။ white man’s burden လို့ လူသိများတဲ့ ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားရဲ့ လူသားချင်းခွဲခြားနှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ် European racism နဲ့ ဒေသခံတွေကို ကယ်တင်ပြီး သူတို့အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ဘ၀ကို ဖန်တီးပေးခြင်းဆိုတဲ့ ကိုလိုနီပြုခြင်းရဲ့ အကြောင်းနောက်ခံတခုကို Snodgress ရဲ့ အတွေးအခေါ်မှာ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
Reference: Rouch Pencillincs or A Rough Trip to Rangoon in 1846. Thacker, Spink and Co.: Calcutta, 1853, p. 17.
« English or Chinese?
Is hopeadangerous thing? »
One thought on “Rangoon/Yangon”
အထည်ကြီးကလဲ ပျက်ခဲ့..သားဆိုး အမေ တပေပေ..လင်ဆိုးမယား တဖားဖား ဆိုသလို လည်း ဖြစ်နေရှာတဲ့.. သနားစရာ မွဲညစ်ညစ် ရန်ကုန်မြို့ကြီးပါပေ။း(
Posted by K | 10/04/2009, 04:54